Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Filohan'ny biraon'ny fizahantany afrikanina any Abidjan, Ivory Coast
Ny filohan'ny birao fizahan-tany afrikanina dia any Abidjan, Ivory Coast ankehitriny mba hiresaka momba ny toetoetran'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Afrika Andrefana
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina tonga tao Abidjan, renivohitra tao amin'ny firenena West Africa ao Cote D'ivoire.
Andriamatoa Ncube dia noraisim-pankasitrahana tamina mpikambana avy amin'ny mpitarika orinasa sy media eto an-toerana. Nihaona tao amin'ny Federasiona ny filankevitry ny fizahantany momba ny fizahan-tany momba ny fifampiraharahana roa tonta sy ny fiaraha-miasa stratejika eo amin'ny Birao Fizahan-tany Afrikanina sy Ivory Coast.
I Côte d'Ivoire dia firenena iray any Afrika Andrefana miaraka amin'ireo toeram-pialantsasatra amoron-dranomasina, ala mando ary lova kolonialy frantsay. Abidjan, any amin'ny morontsirak'i Atlantika, no ivon-toerana lehibe an-drenivohitra. Ny mari-pamantarana maoderina dia misy ny ziggurat, La Pyramide mivaingana ary ny Katedraly St. Paul, rafitra mitaingina mihidy amin'ny lakroa. Any avaratry ny distrikan'orinasa afovoan-tany, ala zaridaina Banco dia ala arovana fitsangantsanganana.
Côte d'Ivoire (koa: Côte d'Ivoire) dia firenena iray any Afrika Andrefana ary manana morontsiraka atsinanan'ny Atlantika Avaratra.
I sisin-tanin'i Ghana dia eo atsinanana, Liberia any andrefana, Guinea eo avaratra-andrefana, Mali any avaratra ary Burkina Faso eo avaratra atsinanana.
Nohamafisina ny fivoriana ho an'ny filoha Ncube miaraka amin'ny minisitry ny fizahantany Siandou Fofana.
I Ivory Coast dia manana tombony lehibe ho an'ny fizahantany ara-tontolo iainana sy ny fizahantany ara-panatanjahantena.
Ny mineraly ao Ivory Coast dia mbola tsy voarara. Nahatsapa Andriamatoa Cuthbert fa misy ny fotoana mety hampiasana vola, tsy ho an'ny tetikasan'ny fizahantany ihany.
Andriamatoa Cuthbert dia nanentana ireo mpiaramiasa fizahan-tany mba hijery ao anatiny ary hampiroborobo ny tsenan'ny fizahantany anatiny hiomanana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny sehatra iraisam-pirenena.
Hoy izy: "Mila fiaraha-miasa tanteraka amin'ireo mpandray anjara rehetra ao anatin'ny faritry ny fizahan-tany ny fizahan-tany mba hahatonga ny fizahan-tany ho mora azo sy ho takatry ny vahoaka anatiny."